Umaki: amagama angukhiye omsila omude | Martech Zone
Maka: amagama angukhiye omsila omude
NgoLwesine, Septhemba 13, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Noma kunini lapho ngichaza isikhundla kumakhasimende ami, ngisebenzisa ukufaniswa komjaho wezikebhe lapho iGoogle ingulwandle futhi bonke izimbangi zakho ezinye izikebhe. Ezinye izikebhe zikhulu futhi zingcono, ezinye zindala futhi azihlali kanzima. Khonamanjalo, nolwandle luyahamba… neziphepho (izinguquko ze-algorithm), amagagasi (sesha ukuthandwa kweziqu kanye nemikhombe), kanye nokuthandwa okuqhubekayo kokuqukethwe kwakho. Kukaningi kunezikhathi lapho engikwazi khona ukukhomba
Esikhathini esingengakanani esidlule, amasu we-SEO abandakanya kakhulu ukuthola isikhundla kumagama angukhiye. Amagama angukhiye kwakuyinto eyinhloko yokukala ukusebenza komkhankaso. Abakhi bewebhusayithi bangafaka lawa masayithi ngamagama asemqoka, futhi amaklayenti angathanda ukubona imiphumela. Imiphumela, nokho, ikhombise isithombe esihlukile. Uma okokufundisa kwakho kwe-SEO kwabasaqalayo kufaka phakathi ukusebenzisa amathuluzi weGoogle ukuthola amagama asemqoka bese uwafaka kuwebhusayithi kuyo yonke, kungenzeka ukuthi iyahamba
ULwesine, April 29, 2010 NgoMsombuluko, Ephreli 11, 2016 Douglas Karr
Izolo, ngenze uqeqesho mayelana nokwenza kahle izinjini zokusesha futhi ngamema abasiki bengqephu, ababhali bamakhophi, ama-ejensi kanye nalabo esincintisana nabo ukuba beze kuqeqesho. Kwakuyindlu egcwele futhi yahamba kahle. Ukubekwa ezinjinini zokusesha akuyona impendulo ngaso sonke isikhathi - inkampani kumele ibe nokuqukethwe okusebenzayo, isiza esihle, kanye nendlela yokuzibandakanya nenkampani. Ngicabanga ukuthi ngiyisazi sokwenza izinjini zokusesha. Ezinkampanini eziningi, ngiyakwazi